कसरी फैलिदैछ नेपालमा ईसाइ धर्म ? – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
कसरी फैलिदैछ नेपालमा ईसाइ धर्म ?
असार २४, २०७५ ०२:३६ मा प्रकाशित
लेखक माईला तामाङ
नेपालमा इसाई धर्मको प्रचार-प्रसार निकै तिब्र गतिमा भइरहेको छ । जनजाति र दलित समुदायमा यो धर्म विगत केहि वर्षदेखि निकै लोकप्रिय भईरहेको देखिन्छ ।
जनजातिहरुमा पनि तामाङ जाती बाहुल्य भएका जिल्लाहरूमा इसाई धर्मको प्रचारप्रसारमा तिब्रता आएको देखिन्छ । गाउँगाउँमा देखिन चर्च , मोटामोटा बाईबल बोकेर हिडिरहेका युवायुवती , गाउँघरमा विदेशीहरुको आवतजावत, नमस्ते र ढोगको सट्टामा जय मसी , धामी झाक्रीको सट्टा चर्चमा प्रार्थना , जलाउनुको सट्टा बाकसमा हालेर पुर्ने नयाँ चलन । यस्तो लाग्छ ,तेह्रौ शताब्दीको कुनै युरोपको पहाडी देशमा पुगे झैं । नेपालको गाउँमा घुमे जस्तो पटक्कै लाग्दैन । बिहेमा लगाइने सेतो पहिरन ,पास्टरले बाइबल पढेर एकैछिनमा गरिदिने विवाह अनि पुसको कठ्याङ्ग्रीने जाडो रातमा देउसी खेले झै खेलिने क्यारोल । कसैको नाम सोधे उत्तरमा आउँछ , अब्राहम ,जोसेफ , याकुव , मेरी , रुथ यस्तै यस्तै …. नेपालका गाउँघर निकै बदलिसकेको देखिन्छ ।
१)इसाई धर्म: विगतदेखि वर्तमान सम्म
नेपालमा इसाई धर्म प्रवेशको इतिहास पाँच शताब्दी पुरानो हो । देवीप्रसाद शर्माको आधुनिक नेपालको इतिहास नामक पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार, १६औँ शताब्दीमा इसाईको रोमन क्याथोलिक सम्प्रदायका धर्मगुरु ‘क्यापुचीन पादरी’ पहिलोपटक नेपाल आएका थिए । वि.सं. १६८५ मा कान्तिपुरका राजा शिवसिंह मल्लले पहिलोपटक क्यापुचीन पादरीहरूलाई धर्मप्रचारका लागि नेपाल भित्र्याएका थिए । कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्ल, ललितपुरका राजा श्रीनिवास मल्ल र भक्तपुरका राजा रणजीत मल्लले उनीहरूलाई निर्भयतापूर्वक धर्मप्रचार गर्न छुट दिएका थिए । त्यसरी छुट दिनेमा ललितपुरका राजा श्रीनिवास मल्लले बढी नै उदारता देखाएका थिए । वि.सं.१८२४ मा उनीहरूले ३९ नेपालीलाई इसाई बनाएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँमा विजय पाउनासाथ आफ्ना ६२ जना शिष्यसहित ती पादरीहरूलाई नेपाल छोडेर जाने आदेश दिए । तिनीहरूले ब्रिटिस जासुसको रूपमा काम गर्ने आशंकामा देश निकाला गरिएको थियो । वि.सं.१८२६ मा ती पादरीहरू उत्तरी विहारको बेतियामा बसाइँ सरे । उनीहरूकै पछि लागेर क्रिस्चियन धर्म अँगालेका काठमाडौँ उपत्यकाका केही नेवारी परिवार पनि त्यतै लागे, जहाँ आजसम्म पनि नेवारी समुदायका रोमन क्याथोलिकहरू बसेका छन् । पृथ्वीनारायणले देश छोडेर जाने आदेश दिए पनि एक पादरीले नेपालमै बस्ने निर्णय गरे । वि.सं.१८६७ मा उनको पनि निधन भएपछि ००७ सालसम्म नेपालमा एक जना पनि क्रिस्चियन पादरी थिएनन् । २००७ मा राणाशासन ढलेर प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि विदेशी मिसनहरूका लागि नेपालमा ढोका खुला भयो । राजा महेन्द्रको पालामा जेसुइट्सहरूको नेपाल प्रवेशसँगै क्याथोलिक समुदायको पनि पुनःस्थापना भयो । जेसुइट्सहरूले शैक्षिक प्रतिष्ठान मार्फत देशको सेवा गर्ने उद्देश्य लिएका थिए । फादर मोरान नामका पादरीले त्यसैबेला गोदावरीमा पहिलो इसाई विद्यालय स्थापना गरे । ००७ सालको परिवर्तन पछि नेपाल छिरेर इसाई धर्म प्रचार गर्ने उनी पहिलो पादरी थिए । उक्त मिसन विद्यालयमा गरिब परिवारका केटाकेटीलाई निःशुल्क शिक्षा दिइन्थ्यो । ००८ सालमा क्याथोलिक सम्प्रदायका अनुयायीहरूको पहलमा ‘सेन्ट जेभियर्स स्कुल’को स्थापना भयो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि ०५० सालमा काठमाडौँको धोबीघाटमा अर्को क्याथोलिक चर्च स्थापना भयो । नेपालको पहिलो प्रोटेस्टेस्ट चर्च पोखराको रामघाट चर्च हो, यो जून २००८ मा स्थापना भएको थियो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा मिसनरीहरूको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । ००७ सालको परिवर्तन र ०४६ सालको परविर्तनअघिको अवधिमा भारतीय सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील मिसनरीहरू गोप्य ढंगबाट नेपाली भूमिमा गतिविधि गरिरहेका थिए । ००७ सालको परिवर्तनपछि उनीहरू ‘नेपाल इभान्जेलिस्ट ब्यान्ड’ नामको मिसन लिएर नेपाल प्रवेश गरे । त्यस मिसनलाई सन १९४० मा भारतीय सीमा नौतनवामा काम गर्ने क्रममा डा. लेडी ओ ह्यान्लन र मिस स्टिलीले प्रतिपादन गरेका थिए, जसको उद्देश्य ईश्वरको नाममा नेपाल गएर त्यसलाई अधीनमा पार्नेहरूलाई प्रशिक्षित गर्नु थियो । पछि सोही मिसनलाई इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप नामकरण गरिएको हो । काठमाडौँस्थित बेलायती राजदूतको संरक्षणमा उक्त मिसन नेपाल भित्रन सफल भएको हो ।
नेपाल रीसर्च एण्ड रिसोर्स नेटवर्कको एक सर्वेक्षण अनुसार, ०६४ सालसम्ममा नेपालमा चर्चको संख्या २ हजार ७ सय ९९ नाघिसकेको छ । वि.सं. ०१९ सालसम्म नेपालमा गिर्जाघरहरूको संख्या केवल दुई थियो । तर ०४६ सालसम्म गिर्जाघरको संख्या २ सय ९२ पुग्यो । र, ०५९ सालसम्म पुग्दानपुग्दै यो संख्या १ हजार ८ सय ३९ भइसकेको थियो । राजधानी उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये चर्चको संख्या ललितपुरमा सबैभन्दा बढी १ सय ३८ छ । ललितपुरको जनसंख्याको ८ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात २७ हजार २ सय ८६ जना इसाई छन् । नेपालमा इसाईकरणको अभ्यास १७ औँ शताब्दीमा ललितपुरबाटै सुरु भएको हो । अहिले अधिकांश इसाई मिसनरी र संस्थाले आफ्नो मुख्य आधार पनि ललितपुरलाई नै बनाएका छन् । काठमाडौँमा १ सय ३२ वटा चर्च र २६ हजार ६ सय ९२ इसाई धर्मावलम्बी छन् । भक्तपुरमा ३९ वटा मात्र चर्च छन् भने ५ हजार ६ सय १९ जना इसाई छन् । राजधानीबाहिर धर्मान्तरण गर्नेमा मकवानपुर सबैभन्दा अगाडि छ, जहाँ १ सय ३६ चर्च र २४ हजार ८ सय ३१ इसाई धर्मावलम्बी छन् । त्यहाँ तामाङ र चेपाङ समुदायमा इसाई धर्म प्रचार तिब्र छ । त्यसपछि धादिङमा ८७ वटा चर्च र २१ हजार ५ सय ७२ अनुयायी छन् । तामाङ जातिको बसोबास रहेका उत्तरी धादिङका पाँच गाविसमा इसाईहरूको बाहुल्य नै छ । चितवनमा ८८ चर्च र १० हजार ५ सय ९३ इसाई छन् । सुदूरपश्चिमको कैलालीमा ७९ चर्च र १० हजार १ सय ८८ अनुयायी छन् । सुदूरपश्चिममा इसाई वृद्धिका लागि कैलालीलाई आधार बनाइएको एक इसाई नेता बताउँछन् । अछाम, डोटीतिरबाट कैलाली बसाइँ सरेका दलितहरूलाई प्रचार र सामाजिक कार्यमार्फत धर्मान्तरण गर्न प्रेरक भएका छन, मिसनरीहरू । चितवनको भरतपुरमा होटल रिजर्व नै गरेर ०५० सालमा इसाई मिसनरीहरूको एक समूह बसेको थियो । उनीहरूले रोगीहरूलाई येशुका नाममा औषधि दिएर र प्रार्थना गरेर दलितहरूको ठूलो संख्यालाई प्रभावित तुल्याएका थिए, जो पछि इसाई भए । बालबच्चा पढाइदिने, विदेश पठाइदिनेजस्ता कार्यले पनि उनीहरूलाई इसाई बन्न प्रेरित गरेको हो । सोही समयमा रसुवाको चिलिमे र धादिङको उत्तरी क्षेत्रमा समेत मिसनरीहरूको व्यापक उपस्थिति देख्न सकिन्थ्यो । डोटीको दिपायलमा खोलिएको कोरीयन मिसनरी स्कुल र चर्चले बालबच्चालाई निःशुल्क पढाइदिएर स्थानीय बासिन्दालाई इसाई बन्न प्रेरीत गरेको थियो ।
नेपालमा मिसनरी अस्पताल, कल्याणकारी संस्था र विद्यालयहरू गरी दर्जनौको संख्यामा इसाई संस्थाहरु सक्रिय छन् । सेन्ट जेभियर्स र सेन्ट मेरीज विद्यालय यसका उदाहरण हुन् । सबैजसो विदेशी इसाई संस्थाहरूको चर्चहरूसँग सम्बन्ध छ । मिसनरीहरूमा खासगरी ‘युनाइटेड मिसन टू नेपाल’ पाँच दशकदेखि नेपालमा छ । करीब १६ देशका ४० वटाजति संस्थाहरू मिलेर बनेको यूएमएनले नेपाल सरकारसँग धर्मप्रचारमा संलग्न नरही सेवा मात्रै उपलब्ध गराउने लिखित वचनवद्धता गरेका छ्न । यूएमएनले ओखलढुंगा र पाल्पाको तानसेनमा अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । नेसनल चर्चेज फेलोसिप नेपाल, राष्ट्रिय मन्डली परिषद् र नेपाल क्रिश्चियन समाज गरी तीनवटा संगठन मुख्य छन् । यीनै संस्थाहरुको छत्रछायाँमा अन्य संगठन सक्रिय छन् । नेपालमा धर्म परिवर्तनका लागि मुलुकभर क्रिश्चीयन मिसिनरी सक्रिय छन्. । तिनको नाम यस प्रकार छ, इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप, युनाइटेड मिसन टू नेपाल, वर्ल्डभिजन नेपाल, मेरी स्टोप्स क्लिनिक मेडिकल, क्रिश्चीयन फेलोसिप, फोकस, टिम मिसन, आड्रा नेपाल, नेपाल क्रिश्चियन चिल्ड्रेन एजुकेसन, क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्ट, इन्टरनेसनल बाइबल सोसाइटी, नेपाल क्रिश्चीयन एलाइन्स, एभ्री होम क्रुसेड, गोस्पेल फर एसिया, विटनेस फर नेपाल, नेपाल बाइबल सोसाइटी, एभान्जेलिकल एलाइन्स, नेपाल लेप्रोसी ट्रस्ट, नेपाल ख्रिस्टीयन फेलोसिप, आगापे क्रिश्चीयन फेलोसिप, इम्यानुएल चर्च मिनिस्ट्रज, गोस्पेल रेकर्डङ्,अपरेसन मोबिलाइजेसन, इन्टरनेसनल निड्स, प्रिजन फेलोसिप नेपाल, नेसनल चर्च फेलोसिप अफ नेपाल, बाइबल ट्रेनिङ्, क्रिश्चीयन आर्ट्स एसोसिएसन, मुभमेन्ट फर युनिटी, क्रिश्चियन प्रोफेसनल फेलोसिप, विश्वविद्यालय क्रिश्चियन विद्यार्थी संगती । यी मेसीनरीले नै मुलुकभर धर्म परिवर्तनको संजाल फैलाएका छन् । त्यसैले अहिले इसाई धर्म अँगाल्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । गाउँका गाउँ नै पनि इसाई बन्ने क्रम चलिरहेको छ ।
३)) नेपालको संविधान र धर्मनिरपेक्षता
नेपालको संविधान २०७२ ले धर्मनिरपेक्ष शब्दलाई परिभाषित गरेको छ । “धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ”भनेर संविधानमा उल्लेख छ । २०६३ सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य हुने घोषणा गरे पछि त्यसै अनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ मा पनि सोहि प्रावधान राखिएको पाईन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत भाग ३ को धारा २६ मा ”धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ। तर कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ” भनेर लेखिए तापनि यसको विपरीत धर्म परिवर्तन रोकीएको छैन । धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था संविधानमा गरिएको कारण पनि नेपालमा धर्म परिवर्तन र इसाईकरण भईरहेको कतिपय विद्वानहरुको तर्क छ ।
बेलायती लेखक जर्ज जेकव होलेकले सन् १८५२ मा आफनो एक लेखमा धर्म निरपेक्ष शब्द प्रयोग गरेका थिए । त्यसपछि यो शब्द विश्वव्यापी भएको देखिन्छ । फ्रान्सले सन् १९०२ मा राज्यलाइ ‘धर्म निरपेक्ष’ घोषणा गरेपछि विश्वमा यसको प्रचलन सुरु भएको हो । हाल विश्वका २०२ मुलुकमध्ये ५६ मुलुक धर्म निरपेक्ष छन् । तर धर्म निरपेक्ष घोषणा भएपछि अधिकांश मुलुकमा क्रिश्चीयन प्रभाव बढेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि दक्षीण कोरियाले सन् १९५२ मा धर्मंनिरपेक्ष राज्यको घोषणा गर्दा त्यहाँको तत्कालीन जनसंख्यामध्ये ८ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र क्रिश्चीयन थिए, अहिले क्रिश्चीयनहरुको संख्या ५० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । जापान, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड र नेपालमा केही वर्ष यता क्रिश्चीयनको संख्या बढेको छ । नेपालमा त्यो संख्या दश गुनाले बढेको बताइन्छ । धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्यमा सबै धर्मप्रति समान व्यवहार र स्वतन्त्रता हो । पवित्र उद्देश्यले धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा गरिए पनि यसको दुरुपयोग गरिएको छ । क्रिश्चीयन मिसिनरीले गलत ढंगले उपयोग गरिरहेको देखीन्छ । २०६३ सालमा नेपालको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष’ राष्ट्र घोषणा गरेपछि क्रिश्चीयन मिसिनरी त्यस काममा झन बढी सक्रिय भए । जसरी संघीयताको जायज मुद्दालाई पश्चिमाहरुले जातीय कलहको विषय बनाउने कोशीस गरीरहेका छन, त्यसैगरी धर्म निरपेक्षतालाई नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने माध्यम बनाईएको पाईन्छ । नेपालमा १२७ जातजाति र सोही संख्यामा सांस्कृतिक परम्परा छन् । हिन्दू, बौद्ध, किराँती र बोन्पो संस्कृति र धर्महरू नेपालका मौलीक सम्पदा हुन । २०६८ को जनगणनाले नेपालमा हिन्दूहरूको ८१ दशमलव ३५ प्रतिशत र बाँकी बौद्ध, किरात, इसाई,पंजावी रहेको देखीन्छ । राज्य र दलका नेतृत्व नेपालमा भईरहेको धर्म परिवर्तनमा गम्भीर देखिएको छैन । प्रचारकहरू घरघर पुगेर तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा समेत इसाई धर्म फैलाउनका लागि सक्रीय छन् । इसाईभित्रका रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट दुवै सम्प्रदायका अनुयायीहरू यसमा सक्रिय छन् । धर्म प्रचारमा प्रोटेस्टेन्टका विभिन्न समुदाय बढी सक्रीय छन् । ग्रामीण विपन्न जनजाती र दलीत बस्तीमा गएर पर्चा बाँडने गरेको देखिन्छ । विरामी पर्दा “इसाई बन्नुस सञ्चो हुन्छ” भनेर भ्रम छर्ने गरिन्छ । सुरुमा “तपाईको लागि प्रार्थना गर्छौ ” भनेर मीठो र चिप्ला कुरा गर्ने इसाई पाष्टरहरु पछि इसाई धर्म मानिसकेपछि भने कठोर रुपमा पेस हुने कतिपय मानिसहरूको भनाई छ । आम्दानीको दस प्रतिशत रकम दिनैपर्ने , चर्चलाई बुझाउने भेटी दिनैपर्ने तर दस प्रतिशत रकम ,भेटी र माथिबाट आउने रकमको कसैले हिसाब किताब मागे “सैतानको आत्मा” भन्ने गरेको इसाई धर्म छाडेर फर्केका व्यक्तिहरु बताउँछन । कसैले नियमित रकम नबुझाएमा समाजबाट एक्लो पार्ने र मरेको बेला लास नउठाउने धम्कि समेत दिने गरेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।
नेपालका नेता सांसदहरूलाई इसाई बनाउने एउटा परीयोजना नै गोप्य रूपमा सञ्चालनमा छ । यो परियोजना नेपालमा लामो समयदेखि सञ्चालित छ । अमेरीका फिनल्याण्डका इसाई संघसंस्थाहरुले आर्थिक सहयोग दिँदै आएका छन् । दुई वर्षअघि नेपालका सांसदहरूलाई आर्थिक सहयोग पठाइरहेका दाताहरू नेपाल आएको र गोदावरी रीसोर्टमा तीन दिनसम्म छलफल गरेका थिए । सांसदहरू र राजनेताहरूलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने र उनीहरुलाई हातमा लिने काम दक्षिण कोरीयाका सन म्योङ् मुन र उनको संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसन (यूपीएफ) हो । मुन युनिफिकेसन चर्च अभियानका नेता पनि हुन् । उक्त संस्थाको प्रायोजनमा नेपालका अधिकांश राजनेता र सांसदको टोलीले विदेश भ्रमण गर्दै आएको छ । उक्त संस्थाको प्रायोजनमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, एमाले पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाल, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट तथा विद्यार्थी नेताहरू प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मा र ठाकुर गैरेसम्मले अमेरीका फिलिपिन्स, कोरीयालगायतका देश घुम्ने अवसर पाइसकेका छन् । यूपीएफका नेपाल प्रमुख सभासद् एकनाथ ढकाल हुन । एकनाथ पनि अनेक प्रवचनका बहानामा क्रिश्चीयन धर्म परिवर्तनको अभियानमा छन् । कतिपय सभासद समेत नक्कली इसाई भएका छन, आर्थिक प्रलोभनमा परेर । अरुको के कुरा, क्रान्तिकारी भनिनेहरु समेत धर्म परिवर्तनको यस्तो खेलमा लागीरहेको देख्न पाइन्छ ।